Matxafka Qaranka Jakarta & Old Harbor oo leh Qado Xalaal ah iyo salaadaha maxalliga ah ee Masjid -
Matxafka Qaranka Jakarta & Old Harbor oo leh Qado Xalaal ah iyo salaadaha maxalliga ah oo lagu tukanayo Masaajid
Loo sameeyay gaar ahaan kuwa aan waligood tagin Indonesia. Dalxiiskan wuxuu bixinayaa muuqaalka dalka, taariikhda iyo dadka. Matxafka Qaranka wuxuu bixiyaa taariikhi, taariikh hore, qadiimiga iyo qowmiyadeed ee Indonesia.
Waxay leedahay mid ka mid ah uruurinta ugu dhammaystiran ee waddanka ee naxaas iyo dhoobada laga soo bilaabo taariikhda Han, Tang iyo Ming Dynasties. Madxafka aruurinta qalabka dhaqanka, maacuunta guryaha, farshaxanka iyo farshaxanka, ayaa gacan ka geysanaya sidii hordhac wanaagsan loogu heli lahaa nolosha qowmiyadaha kala duwan ee Indonesia. (Matxafka Qaranka wuu xiran yahay Isniinta). Ku sii soco booqashada booqashada Sunda Kelapa Harbor, oo ah deked 500 sano jir ah, taas oo muhiim u ahayd boqortooyadii Pajajaran ee qarnigii 15aad iyada oo qayb ka ah ganacsiga dhirta. Maalmahan, dekeddu wali waa mid ka mid ah baaqyada ugu muhiimsan ee loogu talagalay maraakiibta ka shiraacata dhammaan Indonesia. Iyo rinjiga dhalaalaya ee loo yaqaan 'Phinisi' ee loo isticmaalo daabulida alaabada jasiirad ilaa jasiirad ayaa wali la arkaa isagoo ku safan xeebta ilaa maanta.
Joojinta maqaayada maxaliga ah ee Xalaal ee Indooniisiyaanka ah iyo booqashada masjidka deegaanka.
Joojinta maqaayada maxaliga ah ee Xalaal ee Indooniisiya ah iyo booqashada masjidka maxaliga ah ee Jakarta.